Itoobiya oo joojisay dhismaha dhuun shidaal oo Jabuuti ku xirta - Latest News Updates
Itoobiya oo joojisay dhismaha dhuun shidaal oo Jabuuti ku xirta
Dowladda Itoobiya ayaa shaacisay in ay ka baxday heshiis ay Sanadkii 2015kii kala saxiixdeen dowladda Jabuuti kaas oo qorayay in Itoobiya ay dhisto dhuun shidaalka qaadda oo Dalka Itoobiya geysa noocyada kala duwan ee shidaalka.
Masaafada Dhuunta shidaalka ayaa lagu sheegay in ay gaareyso 550KM,waxaana dowladda Itoobiya sheegeysaa in ay u joojisay dhaqaale xumo darteed.
the Reporter. oo ka soo baxa Dalka Itoobiya ayaa sheegay in uu wareystay sarkaal ka tirsan Dowladda Itoobiya una sheegay in dowladda aysan bixin karin lacag ka badan $1.5 Bilyan oo doollarka Mareykanka ah.
Sarkaalkaas oo aan maaciisa la shaacin ayaa sheegay in dowladda Itoobiya ay dhameystirtay dhismaha Waddada Tareenka ee Jabuuti iyo Itoobiya,waxaana ay sheegtay in beddelka kaalinka shidaalka ay Tareenka adeegsan doonto.
Shidaalka Itoobiya ay dibadda ka dhoofsato ayaa gaaraya 3.8 Milyan Mitirik tan,waxaana uu sanad kasta sare u kacayaa 10%,sida ay sheegtay warbixinta The Reporter.
Xilligan ka hor Itoobiya Shidaalka ay adeegsato waxaa ay Jabuuti kaga soo qaadanjirtay Gawaarida waaweyn,ilaa bartamaha Itoobiya waxaana ku bixi jiray qarash aad u farabadan.